Soo-saareyaasha Caafimaadka - Warshad Caafimaad & Shirkado Shiinaha
Tubada hagaha gargaarka culeyska culeyska caafimaadka
✭ Shirkadeena waa mid khibrad badan u leh dhanka wasakhda caaga ah ee catheters-ka caafimaadka. Ma aha oo kaliya wax soo saarka caaryada, laakiin sidoo kale wax taaj oo kale duritaanka caafimaad. Qalabka caaga ah ee loo adeegsaday kateetarkaan caafimaad aad buu qaali u yahay wuxuuna u baahan yahay wasakhyo tayo sare leh. Daloolka gudaha ee badeecada waa dhexroor 1.27mm oo keliya. Qalabadeena caaryada ayaa ka samaysan waxyaabo tayo sare leh oo loo yaqaan 'SKH51'. Qalabkani wuxuu xaqiijin karaa dulqaadka godadka yar yar wuxuuna hubin karaa nolosha adeegga biinka geliya.
✭ Maaddada balaastigga ah ee kateetarkaani waa maaddo jilicsan oo 65-degree ah. Inta lagu guda jiro habka wax taaj oo kale ee duritaanka, way adag tahay in la demold. Iyadoo loo marayo hagaajinta tiknoolajiyada, waxsoosaarka caaryada ee hadda waa mid siman oo wareegga cirbadeynta ayaa la gaabiyey. Waqtigan xaadirka ah, wareegga wareejinta cirbadeyntayadu waa 16 ilbidhiqsi, taas oo badbaadinaysa waqtiga bixinta iyo kharashka macaamiisheenna.
✭ Qaab-dhismeedkeena wasakhda ayaa ka samaysan S136 wax adag, oo nolosha caaryada waa inay gaarto 1 milyan oo jeer. In habka wax soo saarka wax taaj oo kale duray, waxaa lagama maarmaan ah si loo hubiyo saxsanaanta ee wax soo saarka, iyo in la hubiyo in ay tahay mid deggan oo adag inta lagu guda jiro geeddi-socodka shirka.
✭ 7 maalmood * 7 sanduuqa kiniiniga kaydinta 49 sanduuqyada aan qoyaan-karin ee dawooyinka shaqsiyeed ayaa si buuxda u dabooli kara baahiyahaaga maalinlaha ah xitaa markaad safreyso.Midabada qaansoroobaad maalin kasta si gooni ah ayaa loogu calaamadeeyaa daboolka si aad si fudud ugu kala soocdo waxa aad rabto.Daboolka balaastigga ah ee adag ee adkeysiga leh ayaa adkeyn doona ilaa intaad xireyso oo uusan sii fureynin. Ma jiro daawo ku kala firirsan shilka ama saameynta.Naqshadda muuqaalka muuqaalka dhululubadu waxay keydineysaa meel bannaan, oo ka duwan sanduuqyada kiniiniga qaybta bannaan ee qaabban, ee qaadi kara qaar ka mid ah qalabka yaryar.
✭ Tusaale ahaan, PUT CUTTER.Cabbirka 22.5 x 6 X 27 cm Sanduuq kasta oo yar wuxuu cabirkiisu yahay 1.06 inji * * 0.23 inji * 0.86 cm, weyn oo ku filan cabirro kala duwan
Qeybtaan balaastigga ah waa qeyb kamid ah miirayaasha Saliida Ccessaries caaga macaamiisha USA. Qaab-dhismeedkan qaab-dhismeedku wuxuu qaataa heerka DME. Maaddada 'Core' waa S136 bir adag oo adag.
✭ Qaab-dhismeedka caaryadu waa mid fudud, oo leh laba qaab dhismeed oo loo yaqaan 'Becu core inserts'. Wax soo saarka waa PP, oo dusha sare wuxuu u baahan yahay Polish- # 600. Baahida saxnaanta cabbirka alaabtu waa +/- 0.1. Waqtiga bixinta caaryada waa 35 maalmood, iyo wareegga duritaanka waa 35 ilbiriqsi. Caaryada ayaa la tijaabiyey laba jeer oo keliya, macmiilkuna wuxuu naga codsaday inaanu diyaarino dhoofinta warshadda wax lagu duro ee USA.